Ebola mampitahotra: Voafandrika eo amin’ny sisintany iraisan’i Kamerona/Nizeria efa ho 40 ora mahery · Global Voices teny Malagasy
15 ambin'ny folo ora. Tonga omaly taoriana kelin'ny nialàn'ireo andiana mpitsabo
Voadika ny 26 Jolay 2020 7:42 GMT
Vakio amin'ny teny Français, عربي, Español, Ελληνικά, English
(Fanamarihana avy amin'ny mpandika: Lahatsoratra fandrakofana manokana ny valanaretina Ebôlà tamin'ny 2014 izy ity. Ny toromarika fisorohana lazaina ato anatiny anefa dia mifandraika sy ampiharina ho fisorohana ny valanaretina COVID-19. Ny rohy tsy nasiana fanamarihana dia mitondra mankamina lahatsoratra amin'ny teny Anglisy)
Ny 19 Aogositra 2014, nakaton‘ny Repoblikan'i Kamerona ny sisintany iraisany amin'i Nizerià ho fanakanana ny fiparitahan'ny viriosy Ebola, Na izany aza, tsy dia nisy fiheverana loatra an'ireo mpizahatany an'arivony maro ny nandraisan'ny governemanta io fepetra io – mpivezivezy izay teratany Kameroney sy Nizeriàna mipetraka any Kamerona no ankamaroany – voahidy tany ivelan'ny sisintany. Vokany, maro tamin'ireo mpivezivezy no voafandrika nihidy andro marobe tao amin'ny sisintany iraisan'i Kamerona/Nizerià, tanaty fepetra tsy zarizary nampihoron-koditra, niandry ny ho fitiliana azy ireo sao misy otrikaretina Ebôlà alohan'ny hamelàna azy ireo hiverina ao Kamerona.
Ny bilaogin'i Batuo no namoaka ny fitantaràna voalohany ny resaka nifanaovany tamin'i Patricia Temeching, iray tamin'ireo mpivezivezy voafandrika teo amin'ny sisintany efa ho 40 ora mahery:
Nandalo ny toerana fisafoan'ny tafika Nizeriàna aho ary dia naverina tsy fidiny tamiko ny pasipaoroko. Niampita ny tetezana aho. Feno olona marobe ny lafiny ilay avy aty Kamerona, ary toy izany koa ny paositry ny pôlisy/ladoany izay ery amin'ny telo metatra miala ny faran'ilay tetezana… Rehefa nanontaniako ny antony maha-be olona ny eo anaty tetezana dia ramatoa iray hita ho nalahelo no mamaly, “Miandry ny andiana mpitsabo hitily anay izahay sao misy otrikaretina Ebôlà , alohan'ny hahafahana miditra any Kamerona…”
‘Hatramin'ny oviana ianareo no efa niandry teto?’ hoy aho.
“Ora dimy ambin'ny folo. Omaly aho no tonga teto taoriana kelin'ny nialàn'ireo andiana mpitsabo.”
Nanatevina laharana ireo vahoaka maro be aho ary dia niandry izahay ka niandry. Hanoanana sy hatezerana no nanenika ahy. Akanjo vitsivitsy sy ireo antontan-taratasy akademikako no hany tao anaty kitapo fitondra mivezivezy teny amiko. Nony hariva dia nihamaro ireo olona nanatevina laharana anay ary dia nameno ny tetezana sy ilay paositra kelin'ny pôlisy, tao izahay no nijoro sy nandany ny alina. Mitambatra amin'ny hatsembohan'ireo olona efa mahatratra ho roanjato tsy nisasa ny fofona tsy mahasalamana nateraky ny fofon'amany sy tay avy ao ambadik'ilay tranobe, ary toa tsapa ho mamela fofona mahamonamonaina eny amin'ny rivotra.
Ny ampitso maraina izahay nahazo vaovao hoe tsy ho ela dia ho tonga ilay andiana mpitsabo. Samy niandrandra an'izay daholo izahay rehetra. Hatramin'ny nitatao vovonana, tsy nisy na inona na inona nitranga…
Io tolakandro io, rehefa nandany 24 ora teo amin'ilay toerana fisavana eo amin'ny sisintany aho, nomena alàlana izahay handeha an-tongotra mamonjy ny tanànan'i Ekok. Dia an-tongotra izay azo antoka fa hamono olona iray mararin'ny Ebôla. Nanakaràma tovolahy izahay hilanja ny entana. Rehefa tonga tao Ekok dia natsofoka tao anaty tranobe iray, foana no sady tsy misy jiroo, tsy misy toerana fidiovana na fandriana. Io no ho toerana fonenanay mandra-pahatongan'ireo andiana mpitsabo. Ela ny ela, tonga ilay ‘andiana mpitsabo’. Dokotera avy any Eyumojock. Dia nandalo fitiliana izahay. Toy izao no fandehany: nararaka tanaty rano ny Eau de Javel [fanalàna loto]. Nilahatra teo izahay ary nanasa tànana. Nanontsana ny vava ihany koa. Aorian'izay ianao dia voadio sy mahazo alàlana.
Rehefa nahazo alàlana aho (t@ 10 alina), nilaozako ilay tranobe ‘fihibohana’ ary nandeha nitady trano fandriambahiny. Nahita tranokely iray efa godraka izay aho ary dia nisitrika tamina fandriana mampalahelo kely voarakotra lamba koroto fahana ihany nony farany. Taorian'ny efapolo ora nitsanganana, toy ny fandrianan'ny mpanjaka ity fandriana ity. Natory maty tsy nandre izay ambonin'ny tany aho.
Ity no tena ahiahiko fatratra: Ahoana moa raha marina fa nisy taminay (efa ho roanjato olona mpivezivezy ireo) no tonga niaraka tamin'ny otrikaretina Ebôla avy any Nizerià? Dia betsaka ny vintana hoe nifindran'ny otrikaretina daholo izahay rehetra nandritra ny dimampolo ora taorian'ny nanibohana anay niaraka tao, ary dia efa mitondra ny viriosy amin'izao fotoana izao ho any amina ankohonana kameroney roanjato samy hafa.
Araho ny fandrakofana ifotony ataonay: Ny ady ataon'i Afrika Andrefana hanakanana ny Ebôla